Van Persie Iyo Kagawa Oo Shabaqa Soo Taabtay Xilli Man United Ay 3-2 Kaga Badisay Fulham. - jornalizem
Van Persie Iyo Kagawa Oo Shabaqa Soo Taabtay Xilli Man United Ay 3-2 Kaga Badisay Fulham.
Manchester United ayaa guul ku bilaabatay kulankoodii ugu horeeyay xilli ciyaareedkan ee Old Trafford guul ka dib markii ay 3-2 kaga badiyeen kooxda Fulham.
Ciyaarta ayaa ku bilaabatay jawi dardar ah, iyadoo Manchester United ay aheyd kulankoodii ugu horeeyay ee xilli ciyaareedka ee garoonka Old Trafford, halka Van Persie uu ku soo bilowday markii ugu horeysay, iyadoo Rooney uu isna kursiga keydka ku bilowday.
Kooxda Fulham ayaa hogaanka ciyaarta qabatay daqiiqadii 3aad, iyadoo ciyaaryahan Bryan Ruiz oo laad xor ah tuurayay uu si fiican kubad baas ah ugu dhigay booska rigoorada ciyaaryahan Damien Duff kaasoo isna shabaqa ku hubsaday.
Lakiin Man United ayaa durbadiiba dadaal u gashay inay goolkaas barbareeyaan, waxaana daqiiqadii 10aad ee ciyaarta goolkiisii ugu horeeyay u dhaliyay United Robin van Persie ka dib markii karoos ka yimid Patrice Evra uu Van Persie sideeda kula sii dhajiyay shabaqa kooxda Fulham.
RVP kaliya uma uusan aheyn kaliya ciyaaryahankii dhaliyay goolkiisii ugu horeeyay ee Premier League ee Manchester United, waxaa United hogaanka u dhiibay markii ugu horeysay Shinji Kagawa daqiiqadii 36aad ee ciyaarta, kooner uu soo tuuray Van Persie ayaa dibada loo bixiyay waxaana kubada helay Tom Cleverley oo ku soo celiyay kubad joog hoose iyadoo ciyaartoy badan ay goolka hortiisa taagan yihiin. Kubada ayaa ka soo baxsatay goolhaye Schwarzer waxaana helay oo ku taabtay Kagawa.
Kagawa ayaa noqday ciyaaryahankii seddexaad ee reer Japan ee abid gool ka dhaliya horyaalka Premier League.
Ka hor inta aysan dhamaan qeybtii hore ee ciyaarta daqiiqadii 41aad ayay Man United oo qeybtii hore weeraro isdaba joog ah qaadeysay waxaa hogaanka u sii dheereeyay ciyaaryahanka reer Brazil Rafael kaasoo qaab ciyaareed wanaagsan soo bandhigayay.
Qeybtii hore ayaa lagu kala nastay iyadoo Man United ay hogaanka ku heyso 3-1, lakiin qeybtii labaad bilowgeedii ciyaarta uma aysan nooleyn sidii ay aheyd qeybtii labaad, inkastoo fursado yar ay soo mareen United.
Ciyaarta oo 25 daqiiqo ka dhiman ayay Fulham rajo soo gashay ka dib markii ay dhaliyeen goolkoodii labaad ee ciyaarta, iyadoo karoos ay dhanka bidix ka keentay uu gacmaha la waayay De Gea islamarkaana Vidic oo uu ciriirinayo Petric uu ciribta meel kore shabaqa iska geliyay.
Waa markii ugu horeysay oo uu Nemanja Vidic iska dhaliyo gool kulan Premier League ah.
Fulham ayaana markaasi ka dib u soo dhawaatay inay helaan goolka barbaraha lakiin De Gea oo qalad ku lahaa goolkii labaad ayaase ka hor joogsaday Dembele labo fursadood oo qalai ah.
Rafael ayaa isna u dhawaaday inuu natiijada ciyaarta u xaqiijiyo United lakiin dadaalkiisii waxaa ka badbaadiyay goolhaye Schwarzer.
Dhamaadkii ciyaarta ayaa waxaa dhaawac nabar weyn ah uu soo gaaray Wayne Rooney oo bedel ku soo galay qeybtii labaad ee ciyaarta, waxaana garoonka looga saaray bareelo.
Bryan Ruiz ayaana daqiiqadii ugu danbeysay ciyaarta fursad qaali ah ku helay United, lakiin waxaa badbaadiyay goolhaye De Gea oo furtay United islamarkaana ka badbaadiyay inay barbaro galaan.
United ayaa gaartay guusheedii ugu horeysay ee xilli ciyaareedka, ka dib markii todobaadkii hore ay guuldarro ka soo gaartay kooxda Everton.